Nkọwa:Okpukpo Uhie Okpukpọ Ugbo Ala,13 Mkpuchi Ink Steering Wheel,13 Mkpuchi Okwute Silicone
Home > Ngwaahịa > Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone > Ọkaaka mkpuchi ụgbọ ala 13 nke anụ ọhịa
Ihe Nlereanya.: SWC1301
A na-eji ihe mkpuchi ụgbọ ala 13 dịka anụ ọhịa mee ihe na 100% silica grade silicone. Ụlọ ọrụ anyị na-eji silik kachasị mma iji mepụta mkpuchi ụkwụ uhie silicone . Enwere ike iji mkpuchi ikpuchi anụ ọhịa 13 dịka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọala. Ndị ọkachamara na -enwe mmasị na igwefoto ikuku ụgbọ ala , n'ihi na ọ bụ atụmatụ ndị mara mma. Ihe mkpuchi uhie uhie uhie na- eme ka ụgbọ ala gị mara mma, ka ị hụ ya n'anya nke ukwuu. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ mkpuchi wheel , ị nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị.
Igwe mkpuchi uhie ụkwụ na-acha ezigbo mma, nke dị n'ime ya dị mma, ya mere ọ ga-aka mma maka ichebe ugbo ala. ma ọ dị nro, ọ dị nnọọ mma maka iji.
Okpukpo Uhie Okpukpọ Ugbo Ala 13 Mkpuchi Ink Steering Wheel 13 Mkpuchi Okwute Silicone Okpukpo Uhie Okpukpo Ugbo Ala Uzo Nile Okpukpu Uhie Okpukpo Ugbua New Silicone Car Okpukpo Utu Okpukpo Ulo Ogugu Sirium Okwute uhie ugbo ala Okwute uhie ugbua ala